The Fairphone 3 bụ ekwentị kachasị mfe ịrụzi na ahịa | Gam akporosis
iFixit bụ webụsaịtị na-egosi anyị nhịahụ ma ọ bụ nsogbu nke ịrụzi ekwentị. Elsdị dị ka Pixel 3a agafeela n'aka ya, dị ka anyị hụworo, na-arụpụta ezigbo ihe. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ ekwentị dị mfe ịrụzi, mgbe ahụ ọ bụ Fairphone 3 nke na-eguzo dị ka onye mmeri ọ bụrụ otú ahụ.
Fairphone 3 bụ ekwentị na-acha akwụkwọ ndụ ma na-adigide, nke emeputara izu ole na ole gara aga na ahịa. Ekwentị na - enweta nsọpụrụ nke ịbụ onye akpọrọ aha ekwentị kachasị mfe ịrụzi site na iFixit. Ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ chọrọ ịzụta ya.
Nnukwu uru n'ihe banyere ihe nlere a bu na emeputara ya na modulu. Yabụ nke ọ bụla n’ime ihe ndị dị na ekwentị a dị mfe iwepu ma ọ bụ dochie anya ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụ ihe na-enye Fairphone 3 ohere karịa ngwaọrụ ndị ọzọ na ahịa.
Dịka, ekwentị dị elu na-enweta akara dara ogbenye maka ndozi. iFixit na-enyekarị ha akara nke 3 n'ime 10, ma na nke a, ngwaọrụ enwetala akara kachasị elu. Ihe anaghị esiri ike, nke na-enye ya ohere ịbụ ekwentị kachasị mfe ịrụzi.
Ya mere, Fairphone 3 bụ ekwentị na-adigide, ma ọ dị mfe ịrụkwa, uru niile maka ndị ọrụ nwere mmasị na ụdị nke ụdị a. Ọ bụrụ na ihe mee ya, ọ ga-abụ ụzọ dị mma ịmara na nrụzi ahụ ga-adị mfe, nke nwere ike inye aka belata ọnụahịa ahụ.
Na iFixit ị nwere ike ịhụ usoro niile nke a rụrụ na nke a, iji gosi ihe ọ dị mfe iji rụkwaa Fairphone 3 a n'oge niile. Ekwentị nwere nsọpụrụ nke inweta akara kachasị elu na weebụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Fairphone 3 bụ ekwentị kachasị mfe ịrụzi na ahịa
Realme 5 na-anata atụmatụ Dijitalụ Dijitalụ na mmelite igwefoto ekele maka mmelite ọhụrụ